KASOO BAARO CILMI-BAARISTA
Cameroon - Booliska: Wakiilka qeybta, Didier Afana Manga ayaa laga eryay saldhiga booliska…
Isaga iyo lix ka mid ah waxyaabaha uu ka kooban yahay, wuxuu ku xiran yahay baaritaanka bilayska ee kiiskan. Bafia, maaddada ayaa ku jirta qof walba afkiisa. Wakiilka qaybta Didier Afana Manga, madaxa saldhigga amniga…
Midab-takoorka adduunka: marka Afrika ay codkeeda maqasho
Tan iyo geeridii George-Mareykan-Mareykan ah George Floyd bishii Maajo 25, mudaaharaadyada looga soo horjeedo cunsuriyadda iyo rabshadaha bilayska ayaa ku batay adduunka oo dhan. Afrika gudaheeda, shakhsiyaad fara badan ayaa muujiyey midnimadooda iyo cadhadooda…
Tani waa warka wanaagsan ee coronavirus adduunka uu hadda ubaahan yahay - BGR
Heerka dhimashada coronavirus ee loogu talagalay bukaannada COVID-19 ee daran ee u baahan hawo-qaadku way ka yar yihiin sidii markii hore la rumaysnaa. Xogta ayaa muujineysa in bukaannada ku dhaca mashiinnada neefsashada inay leeyihiin fursad sare oo ay kaga badbaadaan hawo-mareenka,…
Dayaxu gebi ahaanba waa bir - BGR
Akhrinta cusub ee NASA ee Dayax-gacmeedka Dayaxa ee Dayax gacmeedka ayaa shaaca ka qaaday in maadada birta ku jirta qalqaalaha dayaxa ay aad uga sarreeyaan dusha sare. Natiijooyinka waxaay daaha ka qaadi karaan xiriir cusub oo ka dhexeeya Dayaxa iyo Dunida iyo taageerada…
NASA wuxuu si dar dar leh ugu sii dhowaanayaa dhamaadka daaqadda Mars - BGR
Ka dib laba dib u dhac oo hore oo riixayay bilaabida NASA ee barnaamijka 'rover Perseverance' ee cusub ee maalmo kadib, furitaanka ayaa dib u dhacay mar labaad. Taariikhda cusub ee la bilaabi doono kama dambaynaysa 30-ka Juulaay, NASA ayaa yidhi. Shaah…
Sharks-yadaan waaweyn waxay leeyihiin ilkaha isha - BGR
Daraasad cusub oo ku saabsan sharks whale ayaa shaaca ka qaaday jiritaanka qaab dhismeedka ilkaha oo aad u yar-yar oo daboolaya indhaha. Astaamahaas waxaa loo maleynayaa in loo istcimaalo kahortaga baabi'inta, u dhaqma sida lakabka hubka. Sharks Whale waa la qadariyaa…
Saynisyahanada ayaa ku magacaabay caaro naxdin leh kadib Joaquin Phoenix's Joker - BGR
Nooc cusub oo caaro ayaa lagu magacaabay Joaquin Phoenix isaga oo uga mahadcelinaya waxqabadkiisa Joker. Noocyadu waxay leeyihiin nabarro madow iyo caddaan iyo sidoo kale qaab cas oo isha ku qabta dhabarkiisa, taasoo ka dhigaysa mid kufiican…
Xiddiga u dhow ayaa sii madoobaaday, oo cilmi baarayaashu waxay u maleynayaan inay ogaadaan sababta - BGR
TELES RELAY Juun 30, 2020 0
Xirfadlayaasheeda indha indheeyayaasha ayaa indha indheeya xiddiga xiddigga weyn ee kooxda u dhow ee Betelgeuse oo sii yaraanaya bilihii la soo dhaafay. Qaar ayaa ka fikiray in xiddiggu uu kaco supernova, oo si qarxa u qarxaya markuu dhinto. Muuqaal cusub ayaa soo jeedinaya xiddiga…
Kani waa habka kaliya ee looga hortago cudurka coronavirus - BGR
TELES RELAY Juun 29, 2020 0
Khubaro badan ayaa aaminsan in coronavirus mowjada labaad ay tahay lama huraan, laakiin daraasad cusub ayaa soo jeedisay inay jirto hal dariiqo oo looga hortagi karo mawjad kale oo weyn oo ah CVIDID-19. In kasta oo ay jiraan iska caabin ka timid dadka qaarkii oo ku adkaysanaya inay tani tahay…
NASA waxay ku siin doontaa lacag aad ku naqshadeyso suuliga Dayaxa - BGR
TELES RELAY Juun 28, 2020 0
NASA waxay ku yaboohday ilaa $ 20,000 naqshadaha suuligaaga dayaxa ah ka hor howlgaladeeda Artemis ilaa Dayaxa. Musqusha waa inay ahaataa mid isku xidhan laakiin sidoo kale qashinka badan haysa, iyadoo sidoo kale aamusnaan yar tahay. Tartanku waa…
hore 1 2 3 4 ... 103 soo socda